नीति/कार्यक्रम | Corporate Nepal
कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन सात दिनमा कार्ययोजना तयार पार्ने पहिलो निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन भन्दै सात दिनभित्र कार्ययोजना तयार पार्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । मन्त्री पदको सपथ खाएसँगै म…
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो, अब कहाँ कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको छ । जसअनुसार यात्रुबाहक सवारीको भाडा ५.४१ प्रतिशतले, पहाडी बाटोमा चल्ने मालबाहक स…
‘डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिलको सुझाव सबैले मान्छन, तर अडिटरको किन मान्दैनन् ?’
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले अनलाइन प्रविधिबाट अडिट (लेखापरीक्षण)मा समस्या रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को ३७ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले यो वर्षदेखि सरकारका सबै…
डिजिटल कारोबार बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आयोः अर्थमन्त्री, बेरुजु बढ्नुमा लेखापरीक्षक दोषी
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को ३७ औं वार्षिक साधारण …
स्वतन्त्ररुपमा विजयी बालेन शाहको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सर्बसम्मतरुपमा पारित
काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०७९–८० का लागि काठमाडौँ महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । स्वतन्त्ररुपमा काठमाडौंको मेयरमा विजयी बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ल्याएको पहिलो…
मन्त्री आलेको अश्लील गाली खाएका नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष निलम्बित
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको अश्लिल गाली खाएका अधिकारीलाई आज मन्…
विशिष्ट व्यक्तिको हेलिकप्टर उडानमा अनिवार्य दुई पाइलट
काठमाडौं । सरकारले तोकेका विशिष्ट व्यक्तिको हवाई उडानमा दुई जना हेलिकप्टर पाइलट राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिक उडुडयन प्राधिकरणले अनिवार्य गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आन्तरिक उडानमा रहेका&nbs…
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रमः बालेन्द्र साहले प्रस्तुत गरे यस्ता योजना
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिँने फोहरलाई घरमै मल बनाउनेलाई सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आईतबार काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको ११ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरि…
बालेनले आज कस्तो ल्याउलान काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रम ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आइतबार आफ्नो महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् । स्वतन्त्ररुपमा काठमाडौंका निर्वाचित भएकाले धेरै आशा गरेका व्यक्ति भएकाले बालेनले आउँदो आ…